Home - Factcrescendo Myanmar | The Leading Fact Checking Website
Fact Check: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အချုပ်ထောင်ပို့တဲ့နေ့မြင်ကွင်းအဖြစ် ဖော်ပြနေတဲ့ ဓာတ်ပုံဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် သင်္ကြန်က ဓာတ်ပုံသာဖြစ်တယ်
Fact Check: ကောင်းမှုတော်ဘုရားနဲ့ ဂြိုလ် ၆ လုံးတန်းတဲ့ဓာတ်ပုံလား- မဟုတ်ပါ
Fact Check: ဒီပုံက ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂ ဦး ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း TNLA ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ဓာတ်ပုံဖြစ်တယ်
Fact Check: မြန်မာစစ်တပ်ကိုအစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုဖို့ ကုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ဆိုတဲ့ သတင်းတုသတင်းမှား
June 29, 2022 June 29, 2022 နေရာမောင်
June 28, 2022 June 28, 2022 နေရာမောင်
June 25, 2022 June 25, 2022 နေရာမောင်
June 24, 2022 June 24, 2022 နေရာမောင်
Fact Check: ဒီဗွီဒီယိုက၂၀၁၉ ခုနှစ်က ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်မွေးနေ့ဆုတောင်း သာဖြစ်တယ် ဇူလိုင် ၁၉ ရက်မှာကျရောက်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မှာသွားရောက်တွေ့ဆုံမှုလို့ဆိုထား ဗွီဒီယိုတစ်ခု ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြု သူတွေအကြားပျံ... by နေရာမောင်
ဒီအစားအသောက်နှစ်ခုအတူစားမိရင်သေတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါ အစားအသောက်နှစ်ခုအတူစားမိရင်သေစေတယ်ဆိုတဲ့ပို့စ်တစ်ခု လူမှုကွန်ယက်သုံးစွဲသူတွေ အကြားမှာ ပျံ့နှံ့မှု အားကောင်းခဲ့ပါတယ်။ “သတိ နဂါး... by နေရာမောင်
Fact Check: မြန်မာစစ်တပ်ကိုအစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုဖို့ ကုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ဆိုတဲ့ သတင်းတုသတင်းမှား အာဏာသိမ်း မြန်မာစစ်တပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအဖြစ် ကုလသမဂ္ဂကအတည်ပြုလိုက်ပြီဆိုတဲ့ပို့စ်တစ်ခု ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြု သူတွေအကြားပျံ့နှံ့လျက်ရှ... by နေရာမောင်
Fact Check: ကောင်းမှုတော်ဘုရားနဲ့ ဂြိုလ် ၆ လုံးတန်းတဲ့ဓာတ်ပုံလား- မဟုတ်ပါ ၁၈ နှစ်မှာတစ်ကြိမ်သာမြင်ရလေ့ရှိတဲ့ ဂြိုလ် ၅ လုံးတန်းဖြစ်စဉ်ဟာ မြန်မာဘာသာလူမှုကွန်ယက် အသုံးပြုသူ တွေအကြားမှာ ရေပန်းစားခဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖ... by နေရာမောင်
Fact Check: ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ Gg လို့ရိုက်လို့ ပန်းရောင်ပြောင်းတာ အကောင့်လုံခြုံရေးနဲ့ မဆိုင်ပါ ​ ဖေ့စ်ဘွတ်ပို့စ်အကောင့်လုံခြုံမှုရှိမရှိစစ်နည်းဆိုပြီးတော့ ပို့စ်တစ်ခုဟာ ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူများအကြား ကြိမ်ဖန် များစွာမျှဝေလျက်ရှိတာတွ... by နေရာမောင်
အာဏာသိမ်း မြန်မာစစ်တပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအဖြစ် ကုလသမဂ္ဂကအတည်ပြုလိုက်ပြီဆိုတဲ့ပို့စ်တစ်ခု ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြု သူတွေအကြားပျံ့နှံ့လျက်ရှိပါတယ်။ သတင်းတုသတင်းမှားတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကတည်းက ကုလသမဂ္ဂက မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ရှုတ်ချထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ “* 21.6.2022 . သတင်ထူးပြီ * ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ နစကအစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရပါတဲ့ အမျိုးတို့ရေ😍😍😍 အားလုံး ပျော်ကြရဲ့လားဝေ့ နစက အားတရားဝင်အစိုးရအဖြစ် သတ်မှတ်ရေး အဆိုကို ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ရယူရာမှာ ထောက်ခံမဲအများစုဖြင့် “နစက”အား မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအဖြစ် အတည်ပြု👌 ထုံးစံအတိုင်းကန့်ကွက်တာက တူရကီ × ကြားနေတာက USA ; UK , နဲ့အနောက်နိုင်ငံအချို့😎 နစကအားအစိုးရအဖြစ် အတည်ပြုထောက်ခံတာက တရုပ် အိန္ဒိယ ရုရှား အာဆီယံ ၁၀နိုင်ငံအပြင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉….ကမ္ဘာ့လူလည် ငပွတွေ စောက်ရှက်ကွဲကုန်ပီ…”စသည်ဖြင့် ရေးသားပြီး “Min […]
June 17, 2022 June 18, 2022 နေရာမောင်
June 9, 2022 June 9, 2022 နေရာမောင်
June 8, 2022 June 8, 2022 နေရာမောင်
June 7, 2022 June 7, 2022 နေရာမောင်
July 10, 2021 June 1, 2022 နေရာမောင်
January 11, 2021 June 1, 2022 နေရာမောင်
January 5, 2021 June 1, 2022 နေရာမောင်
December 22, 2020 June 1, 2022 နေရာမောင်
December 16, 2020 June 1, 2022 နေရာမောင်
June 23, 2022 June 24, 2022 နေရာမောင်
Hein Aung commented on Fact Check: ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁ ရက်စပြီး လျှပ်စစ်မီတာခတိုးကောက်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမှား: သတင်းမှားမှန်းမသိလို့ Share မိပါတယ် အခုဖျက်လိုက်ပါ
aungaung kyalay commented on Fact Check: ဒီဓာတ်ပုံတွေက AA ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်းက ဓာတ်ပုံတွေသာဖြစ်တယ်: Thank you
Mann Htun commented on Fact Check: ဒီဓာတ်ပုံတွေက AA ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်းက ဓာတ်ပုံတွေသာဖြစ်တယ်: Thank you for your correction.
မင်းအဖေ commented on Fact Check: Taylor Swift သေဆုံးမှု သတင်းတုသတင်းမှားသာဖြစ်တယ်: အေးပါ စောက်ဆရာကြီးတို့ရဲ့ လူတိုင်းသိပါတယ် 😋🤣🤣🤣
Zaw Lin Thein commented on Fact Check: ဒီဓာတ်ပုံကထောင်ကျသွားတဲ့ ၃ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ရဲ့ ပုံမဟုတ်ပါ: ဒီလို သတင်းမျိုးကို စောစောတင်ပေးပါဗျာ။ ကျွန်တော်တိ